अ’पह’रणमा परेकी भनिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको ९ दिन पछी आज जंगलमा लहरामा अल्झिएको अवस्थामा श’व फेला ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 4, 2021 July 4, 2021 AdminLeaveaComment on अ’पह’रणमा परेकी भनिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको ९ दिन पछी आज जंगलमा लहरामा अल्झिएको अवस्थामा श’व फेला ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
सुजिताको परिवारले शवको पहिचान गरिसकेको उनले बताएका छन । सुजिताको श.व जंगलको बीचमा रहेको खोल्साको लहरामा अल्झिएको अवस्थामा फेला परेको थियो । शवको अवस्था हेर्दा उनको मृत्यु २ दिन अगाडी नै भएको हुन सक्ने उनले बताए । घ’टना बारे भिडियो यहाबाट हेर्नुहोस्ः